Akụkụ Cutter& Ndị na-emepụta ihe nchebe | China Side Cutter& Nchebe Suppliers & Factory
Ịkpụ ezé ịwụ
Ihe nkwụnye ịwụ
Akụkụ Cutter& Nchebe
Ịcha Edge& Ọgwụgwụ Bit
8E1848(80mm) Ripper Nchekwa maka Excavator spare Pa ...
Ọdịmma dị elu135-9600 Caterpillar Arọ Ọrụ eze J6...
Aili Excavator akụkụ mapụtara 2878-V61Z (80mm) Bevel Ada...
9J9600 nchekwa maka Excavator mapụtara akụkụ Rock ịwụ
Ihe dị elu V61SD ESCO Maka akụkụ nke Excavator mapụtara H ...
CAT E330/J460 nkwụnye 8E6464 Maka Excavator Spare Par...
Ihe nkwụnye E312/J250 CAT 3G0169 Maka Excavator Spare Par...
135-9300 CAT E200/J300 Maka akụkụ nke Excavator mapụtara HD ...
9N4453 CAT E330/J460 Maka akụkụ mapụtara Excavator HD Lo...
9N4303 CAT E200/J300 Maka Excavator Spare Parts Abras...
7T3402 CAT E325/J400 N'ihi na Excavator mapụtara Parts guzo...
9N4302 CAT E200/J300 N'ihi na Excavator mapụtara Parts guzo...
4T2353RP CAT E320/J350 N'ihi na Excavator mapụtara akụkụ Pen...
1U3552/9W8552 Caterpilliar eze J550/E345 Maka Exca...
9J4259 Caterpilliar eze J250/E312 Maka Excavator S...
4T2253 Caterpilliar eze J250/E312 Maka Excavator S ...
Ntụtụ na onye na-ejigide , mmiri na-ejigide mmiri, pin/mkpọchi, maka Ex...
Komatsu PC100 Cutter akụkụ oghere anọ 201-70-74171/201-70-74181
High Quality Alloy Steel cutter akụkụ akụkụ ahụ mapụtara 201-70-74171 / 201-70-74181 maka Komatsu PC100, dakọtara na bolt&nut&washer&spring washer 6V5845 &6V7742&8T3282&3B4512. Dochiri maka ụwa ama ama ama Komatsu .nwere nkedo na imepụta usoro mmepụta abụọ dị iche iche.
Akụkụ China J350 096-4747/4748 Akụkụ Cutter ejiri na-egwu E200
Akụkụ Nọmba: 096-4747/4748
Agba: odo ma ọ bụ isi awọ
Igwe eji eme ihe: E200
7Y0203 7Y0204 SIDE CUTTER KIT maka CAT 312 312B 312C 312F
Akụrụngwa Emere: Caterpillar
Ụdị: 312 312B 312C 312D 312F
Akụrụngwa Ụdị: Excavator
Akụrụngwa dakọtara: Katerpillar
Ogo Alloy Steel akụkụ cutter 208-70-34160 maka Komatsu PC400
High Quality Alloy Steel cutter 208-70-34160 maka Komatsu PC400, kenha na bolt&nut&washer&spring washer 8T0368 & 8T1583 & 3S1349 & 3B4520. Dochiri maka ika ụwa ama ama Komatsu.nwere nkedo na imepụta usoro mmepụta abụọ dị iche iche.
Alloy Steel n'akụkụ cutter akụkụ mmapụta dị elu 208-70-34170 maka Komatsu PC400
High Quality Alloy Steel akụkụ cutter akụkụ mapụtara 208-70-34170 maka Komatsu PC400, kenha na bolt&nut&washer&spring washer 8T0368 & 8T1583 & 3S1349 & 3B4520. Dochiri maka ika ụwa ama ama Komatsu.nwere nkedo na imepụta usoro mmepụta abụọ dị iche iche.
Ogo Alloy Steel akụkụ cutter akụkụ mapụtara 7Y0357/58 maka Caterpillar E330
High Quality Alloy Steel cutter akụkụ akụkụ ahụ mapụtara 7Y0357/58 maka Caterpillar E330, dakọtara na bolt&nut&washer&spring washer 8T0368 & 8T1583&3S1349 & 3B4520. Dochiri maka ika ụwa ama ama Caterpillar.nwere nkedo na imepụta usoro mmepụta abụọ dị iche iche.
9J9600 Nchebe maka Excavator mapụtara Parts Rock ịwụ, ọ ga-echebe ịwụ na ka ọ na-eji ndụ ga-adị ogologo. Ụlọ ọrụ Aili nwere usoro mmepụta ihe abụọ: nkedo na ịgha.
8E1848(80mm) Ripper Nchekwa maka Excavator mapụtara Parts R450 Rock ịwụ.
8E1848(80mm) Ripper Protector for Excavator Spare Parts R450 Rock ịwụ , ọ ga-echebe ịwụ na ka ọ na-eji ndụ ga-adị ogologo. Ụlọ ọrụ Aili nwere usoro mmepụta ihe abụọ: nkedo na ịgha.
Ezé ripper – Shank – Ripper echebe 112-2489-36 (E320-30)
E320-35 Ihe nchekwa akụkụ 17.3KG
ZX330 nchekwa nchekwa Rib maka akụrụngwa dị arọ
ZX330 Akụkụ nchekwa nchekwa Rib maka akụrụngwa dị arọ, ịdịmma na ọrụ na-ekwe nkwa. Aili raara onwe ya nye GET Spare Parts Casting na Forging mpaghara afọ 40, na-ebupụ ihe karịrị mba 100. Aili na-atụ anya ịbụ onye gị na ya na-emekọ ihe ogologo oge na China.
HS175-140 Excavator ịwụ echebe site na mmepụta Aili
HS175-140 Excavator ịwụ nchekwa si Aili nrụpụta, ịdịmma na ọrụ na-ekwe nkwa. Aili raara onwe ya nye GET Spare Parts Casting na Forging mpaghara afọ 40, na-ebupụ ihe karịrị mba 100. Aili na-atụ anya ịbụ onye gị na ya na-emekọ ihe ogologo oge na China.
LP-30 LP-40 LP-50 agụba nchekwa egbugbere ọnụ na-ekwe nkwa
LP-30 LP-40 LP-50 agụba echebe egbugbere ọnụ na-ekwe nkwa, àgwà na ọrụ na-ekwe nkwa. Aili raara onwe ya nye GET Spare Parts Casting na Forging mpaghara afọ 40, na-ebupụ ihe karịrị mba 100. Aili na-atụ anya ịbụ onye gị na ya na-emekọ ihe ogologo oge na China.